LAYAAB: Macallinka xulka qaranka Ukraine oo isku daray xiddigaha caawa wajahaya dhiggooda France – Gool FM
(Paris) 07 Okt 2020. Macallinka xulka qaranka Ukraine ee Oleksandr Shovkovskiy ayaa isku daray liiska xiddigaha xulka ee caawa ka hortagaya dhiggooda Faransiiska.
Tababaraha Ukraine ayaa ka mid ah haatan xiddigaha xulkiisa ee caawa ka hortagaya xulka ku guuleystay Koobkii Adduunka ee 2018, kaasoo ah mid saaxiibtinnimo.
45-sano jirkaan lagu magacaabo Oleksandr Shovkovskiy ee hoggaamiya Ukraine ayaa horay u soo ahaan jiray goolhaye, waxaana uu caawa wajihi karaa xulka Faransiiska, kaddib markii labadii goolhaye ee xulka Ukraine uu haleelay Korona Fayras.
Maadaama labada shaba ilaaliye ee xulka Ukraine uu ku dhacay KOFID 19, Tababare Oleksandr Shovkovskiy ayaa isku daray liiska xiddigaha wajahaya xulka Faransiiska, waana arrin ay la yeebeen inta badan dadka la socda kubadda cagta.
Xulalka Ukraine iyo France ayaa kulankooda saaxiibtinnimo ee caawa waxaa la baasan doonaa 10:10 habeennimo xilliga geeska Afrika.